Mid ka mid ah jadwallada ugu caansan ee isticmaalka Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed waa dhismaha lakabyada jilicsan ee laga helo macluumaadka ka imanaya goobta. Haddii ay tani u taagan tahay isuduwayaasha, iskudubaridyada sirqoolaha ama qotada korantada, macluumaadka sida caadiga ah waxay ku yimaadaan faylasha ay kala soocaan jamacada ama mawjadaha feylka ee Excel.
Waxyaabaha loo adeegsado isticmaalka QGIS ee ku jira Android & iOS mobile
QGIS waxay lafteeda u taagan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ee kor u qaadida nidaamka code iyo istaraatejiyadda joogtaynta ee isticmaalka geospatial. Waxaan ku faraxsanahay in aan ogaanno in ay jiraan noocyo kala duwan oo ah QGIS loogu talagalay qalab mobile. Isticmaalka qadarka ah ee codsiyada moobiilka micnaheedu waa qalabyada moobiilku waxay doortaan inay samaystaan ​​qoraal ku saabsan isticmaalka taleefannada ama kiniiniyada ...
BIM - dhaqankan karin ee CAD
Macnaha of Geo-Engineering our, mar dambe novel waa BIM ereyga (Building Information Qaabaynta), kaas oo u ogolaanaya waxyaabaha ka duwan nolosha dhabta ah loo qaabeeyey karaan, ma aha oo kaliya in ay matalaad graphic laakiin marxaladaha kala duwan ee nolosha . Ka dhigan tahay in wadada a, buundada, waalka ah, kanaalka ah, dhismo ...
Twitter ayaa u yimid inay joogaan, gaar ahaan xoojinta ku tiirsanaanta internetka ee dadka isticmaala isticmaalka maalin kasta. Waxaa lagu qiyaasayaa in 2020 80% isticmaalayaasha internetka ay ku xiran doonaan qalabka moobiilka. Waxba maaha arimahaaga, haddii aad tahay cilmi-baarayaal, la-taliye, bandhig, ganacsade ama madax-bannaan, maalin walbana waad ka qoomameyn kartaa ...
Nooca Google Earth Pro ayaa joojiyay in la bixiyo waqti dheer kahor, kaas oo suurtagal ah in si toos ah looga furo codsiyada GIS iyo Raster. Waxaan fahamsanahay in ay jiraan siyaabo kala duwan oo loo diro faylka SHP ee Google Earth, ama barnaamijyada macaamiisha sida BentleyMap ama AutoCAD Civil3D, ama il furan ...
dalalka maalin walba diiradda on taxanaha e-dawladda halkaas oo geeddi socodka waa fududeeyay in search of bixinta adeeg wanaagsan in muwaadiniinta, iyo sidoo kale xadad hoos musuqmaasuq iyo hawl-xafiiseedyada loo baahnayn. Waxaan ognahay in sharciyada, hay'adaha iyo nidaamyada ku saabsan hanti kasta oo dalka ka mid ah ay yihiin ...
MyGeodata waa adeeg internet ah oo cajiib leh oo ay suurtagal tahay in lagu bedelo xogta geospatial, oo leh qaabab kala duwan oo CAD, GIS iyo Raster ah, si loo kala sooco habka iyo habka tixraaca. Si sidan loo sameeyo, kaliya fayl garee faylka, ama tilmaam URL meesha lagu kaydiyo. Faylasha waxaa loo soo gudbin karaa hal mid, ama ...
In 2005 ahayd markii ugu horeysay ee aan ka qaybgalay User ESRI shirka, mar walba oo meel la mid ah: Heshiiska Xarunta San Diego, calammo sita oo waaweyn oo ka dedan oo ka mid ah waddada dheer ee muraayad laalaaday. Kuwo kayeelan waxay kooxuhu isku la gadhku dhegdheg iyo khamiisyo cadcad, tans qaaradda Afrika la qoslayay ...
Tuuray - software A free for falanqaynta dembiga
Qeexidda qaababka dhacdooyinka dembiyada iyo isbeddelladu waa mowduuc daneynaya Dawlad Gobol ama dawlad hoose. CAST waa magaca barnaamijka bilaashka ah, cinwaanada fal-dambiyeedka dembiga (Space Space) - Waqtiga, oo laga bilaabay 2013 sidii xal fara badan oo loogu talagalay falanqaynta anshaxa, oo leh qaab ...
Waxaa laga yaabaa inaan waligeen ku riyoon inaan arko khariidada taariikhiga ah, oo ku dul yaal Google, si aan u ogaanno sida ay 300 sannadkii hore ahayd dhulkii aynu maanta taaganahay. Tiknoolajiyada khariidada ee internetka ayaa u oggolaatay Oo nidarow! qaabkee Tusaale ahaan tani waa khariidadda nostalgic ee London, halkaas oo aan kaliya ay qaban ...
Tirooyinka qabow ee Top 40 Geospatial on Twitter
Wakhti kale ayaanan aaminsanayn in hawlaha akoontiga Twitter ay noqon karaan kuwo aad muhiim u ah. Hase yeeshee, adduunka oo aan ku dabooli karno maadooyinka content, saddexda saacadood ee nolosha Tuit waxay noqotaa mid soo jiidasho leh haddii lagu soo saaro hab joogto ah oo doorasho leh kuwa heysta matalaya aqoonta, in ka badan ...
Waxaa u yimid inuu arrinta bilood ee hore ee 2015 la content qiimo leh hubaal arrimaha luqadda Español.Los oo keliya odhan qiimaha wakiil hawlgalayaasheeda: soobixi marxalad cusub ee maamulka dalka. Tani waa maqaal weyn oo ay Chrit Lemmen iyo saddex saaxiibadood oo kale u hadlaan sida ...
Qorshaynta dhuleed waa qalab loogu talagalay isticmaalka joogtaynta khayraadka dabiiciga ah. Sanado badan dhulka Peruvian ayaa lagu qabtay hoos macquulka ah si uu u sameeyo ugu khayraadka dabiiciga ah, mararka qaarkood keenaya saamaynta xun ee la lafaguro oo salka wax soo saar ee dalka, sidoo kale guud ahaan ...
Markii aan akhriyey aragtiyaha kala duwan oo taageera isgaarsiinta ku lug khariidaynta labadaba sida sayniska si ay u matalaan ifafaale juqraafi sida farshaxanka macluumaadka this siin bilicsanaanta loo baahan yahay, waxaan ognahay in waqtiga aan ku nool nahay waxaa ka mid ah falalka kala duwan ee nolol maalmeedka halkaas oo aan u adeegsan karno geesinimo sidii fal!
Geo-laysku daraa dhamaan qiimaha dib-u-eegga ee GIM ee Caalamiga ah iyo Hydro International hal meel. Geo-matching.com waa website madaxbannaan oo isbarbardhigaya alaabooyinka loogu talagalay qalabka iyo mihnadlayaasha barnaamijka ee gaaska, hidrrolojiyada iyo maadooyinka la xiriira. Waxaan dooneynaa inaan ku wadi karno martida inoo soo maraan labiska ...
Geomarketing vs. Privacy: Impact of geolocation ee user caadi ah
Tan iyo markii ay sal-dhigida in industry advertising ah, geolocation uu noqday buzzword ah, iyagoo laga garto sida mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee qalabka mobile la barbar dhigo kumbiyuutarada, sida ay xayeysiiya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa looga doodayaa mawduuca asturnaanta ee, sida laga soo xigtay qaar ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ... Page 19 page Next